Home News Gudoomiyaha Aqalka Sare”Maahan in uu ku Marmarsiiyo ka dhigto Warbaahinta,waa in uu...
Gudoomiyaha Aqalka Sare”Maahan in uu ku Marmarsiiyo ka dhigto Warbaahinta,waa in uu Cadeeyo Mowqifkiisa!!
Gudoomiyaha Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ugu baaqay warbaahinta iyo bulshadda Soomaaliyeed in si degan loo wajaho xaaladda cakiran ee golaha Shacabka Soomaaliyeed.
Waxaa uu warbaahinta ugu baaqay in ay ka fekaraan sidii si nabadgaliyo loogu dhameyn lahaa Khilaafka.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in haddii warbaahinta Soomaaliyeed ay buunbuuniyaan Khilaafka uu sameyn weyn ku yeelan doono dalka oo dhan.
Waxaa uu xusay in jirto xaalad adag oo loo baahan yahay in loo wajaho si degan oo ay ku dheehan tahay wadaniyad, si loo Afjaro Khilaafka Baarlamaanka iyo Xukuumadda.
Murankan siyaasadeed ayaa sii xogeystay 24kii saacadood ee la soo dhaafay, iyadoo beesha caalamka iyo hey’adaha bulshada rayidkuna ay ku baaqayaan in xiisadda la dejiyo si loo badbaadiyo guuliha ilaa iyo hadda laga gaaray dowladnimada, amaanka Soomaaliya.